I-Pyrolytic Boron Nitride (PBN) (PBN) iipleyiti ze-ceramic
Eyona nto iphambili yokutsala i-Interting yokuthambisa
I-PBN entle ye-pbn ihamba ne-piyrolytic boron wimide dera ye-CORRAIC ye-COTE CREAMY SECHINCH
I-PBN icocekile (99.995%) i-ceramic yezobuchwephesha, ifakwe kwimilo emiswayo yesimahla (i-subcables) kunye neengubo kwigrafu esebenzisa igrafu ye-pictor yekhemikhali (i-CVD). Ubume be-crystal yele ceramic enganetyhefu yeyokuba ibonisa inqanaba eliphezulu le-thermal anisotropy ethandekayo ukuba kukukhula kwekristale kunye nezinye iinkqubo.
I-Pyrolytic Boron Nitride (PBN) i-cearamic ekhethekileyo, ifunyenwe kwizixhobo ezizodwa ngokusebenzisa inkqubo ye-Vapor yeVidiyo yePhemikheli. I-pidrolytic boron nittride yenkqubo yenkqubo, njenge "ikhephu": i-hexagonal boron nitride yekhephu ehambelana nayo, kwaye ifikelela kubungqingqwa obuthile.
1) Icandelo le-elektroniki - Izinki ezishushu, imiqathango, i-coil, iiprototypes
2) I-Boron idlala i-wafers e-silicon semiconductor
I-3) vacuum ukunyibilika kweelekese
I-4) Ukutywina okuphezulu, brazing, kunye nokudityaniswa kwe-metall
I-5) I-microwave tubes
I-6) I-CRESTAATAAL SORTAR
7) Amatywina aphantsi aphantsi
I-8) I-PLASMA ARC
I-9) Iqondo lokugcina amaqondo obushushu kunye nenkxaso
I-Pyrolytic Boron Nitride (PBN) Iipleyiti ze-ceramic
I-Pyrolytic Boron Nitride (PBN)
Izitokhwe ezininzi, ixesha lokuhambisa malunga neentsuku ezingama-5-10. ngolwandle okanye ngomoya njengokucela umthengi
I-fesm yegesi (yena)
cm3 / s
Ubunzima obukhulu (butop)
I-691.88 (i-A-B Indiza)
Umthamo othile wobushushu
Cal / g. ℃
0.371 (@ 200))
Ukuqhutywa kwe-thermal 200 ℃
Ukuqhutywa kwe-thermal 900 ℃
Amandla kaDiectoric (RT)
Ukucoceka okuphezulu kunye nokuzinza kwamachiza
Ukungakhathali nokungaphantsi okuphantsi kunye nokuthoba kwi-Ultra-rightum vacuum (Uhv)
Ukunganyangeki okuqinisekileyo kwe-thermal
I-XTL ine-7000 yeemitha zokusebenza